Kutya haisi zano | Martech Zone
Chitatu, Nyamavhuvhu 30, 2006 Chitatu, Nyamavhuvhu 30, 2006 Douglas Karr
Kutya haisi zano. Muna 1929, Walter Cannon akatsanangura kurwa-kana-kutiza sekupindura kunetseka kwakanyanya. Kutya kunogona kukanganisa zvakafanana pamakambani. Kambani inogona kurwa, kana kambani inogona kutora kutiza. Kurwa kunoita kuti kusimbe, kubhururuka kunotadzisa kufambira mberi kwayo. Kamwe kambani ikachinjira kune yakaderera giya nekuda kwekutya, zvinonetsa zvakaoma kuti vadzokere kuagility nekumhanyisa zvavaive nazvo kare. Yako kambani inofanirwa kurwa.
Kutya: manzwiro anoshungurudza anomutswa nenjodzi iri kuuya, huipi, kurwadziwa, nezvimwewo, kunyangwe kutyisidzira kuri kwechokwadi kana kufungidzira; kunzwa kana mamiriro ekutya. - Zvinoenderana neDuramazwi.com
Kutya kukambani kunowanzoitika kufungidzira pane chokwadi. Kutya kukwikwidza, kutya kukundikana, kutya zvipuka, kutya kuraswa, kutya kurasika purofiti, nezvimwewo zvese zvinofungidzirwa kutya izvo zvinokanganisa kufambira mberi. Vashandi vanogona kutya kurasikirwa nebasa ravo, kutya kusakwidziridzwa, kana kutya kusawana muripo wavanotarisira. Kana iwe uchirega kutya kuchikanganisa hunyanzvi uye tarenda rezvemabhizimusi, iyo kambani isingatyi chido kupfuura newe. Ndipo apo kutya kwako kunova kwechokwadi.
Kana iwe uine kutya mukambani yako, iri kukukwevera iwe pasi. Kana iwe uine vashandi vanotya, ivo havasi ivo vane ushingi uye vachiwedzera kusvika kumatambudziko avanotarisana nawo. Bvisa kutya nekudzidza kubva mukundikana pane kuranga, nekupa mubairo pundutso uye kubudirira, nekucheka kutya kune iko kunobva. Vashandi vanoparadzira kutya vanofanira kubviswa. Ndiwo mugwagwa unodzivisa kufambira mberi kwekambani yako. Kutya chirwere chinopararira nekukurumidza. Kurumidza kuita squash iyo.
Bvisa kutya uye kambani yako ichakwikwidza kukwikwidza, vashandi vako vanozoshinga uye voita izvo zvakanaka, uye vatengi vako vachakuda nekuda kwako.